Incwadi Yonyaka Ka-2016—AmaHebhere 13:1 | Incwadi Yonyaka Ka-2016
“Uthando lwenu lobuzalwana maluqhubeke.”—Hebhere 13:1
‘Abaninzi baya kuthiyana. Luya kuphola uthando lwabaninzi.’ (Mat. 24:10, 12) Ngesi siprofeto uYesu wabonisa ukuba abantu ababephila kwiminyaka yangaphambi kokutshatyalaliswa kweYerusalem ngo-70 C.E., babeza kuphelelwa luthando. Ngokwahlukileyo koko, abafundi bakaKristu babeza kubonwa ngothando abanalo. (Yoh. 13:35) Amazwi kaPawulos amele ukuba awakhuthaza nyhani amaKristu angamaHebhere aseYerusalem kuba ayebonisa ukuba anothando lobuzalwana kwaye ayefanele aqhubeke elubonisa.
Namhlanje, sisondele ekuphelisweni kwenkqubo yezinto yeli hlabathi likaSathana. Njengabazalwana bethu benkulungwane yokuqala, siphila nabantu abathanda imali, iziyolo nabazidlayo kunokuba bathande uThixo nommelwane. (2 Tim. 3:1-4) Sekunjalo, wona amaNgqina kaYehova aqhubeka ethandana ehlabathini lonke. Kwanga singamdumisa uYehova oluthando lumntwisiwe, ngokuqhubeka nothando lwethu lobuzalwana.